Kubvumidzwa kweVashandi - Mamiriyoni eMakona
Kubvumirira Kubvumirwa mukati
Isu tinotsigira vanhu vamwe nevamwe uye makambani pakuwana mikana nevanovhoterwa, zvichiteerana uyezve mukushandisa nekupedzisa maitiro aya.
Isu tinokudziridza vatengi vedu nekutsungirira kwakawanda uye kunzwira tsitsi.
Isu tinopa mhinduro dzakagadzirirwa vanhu / mhuri / mabhizinesi madiki / makambani makuru epasi rose anoshanda zvakanyanya kwauri nerutsigiro kune zvese zvaunoda zvekufambisa.
Goverana zvaunoda nesu uye isu tinokufambisa sei, pasi rese.
Residency | Citizenship | Chibvumirano Chebasa | vhiza
Nerutsigiro rwedu rwakajeka, rwakajeka uye rwakasarudzika, iwe unonzwisisa rako basa mukushambadzira uye unoziva chaizvo zvaunofanira kuita kuti iwe nemhuri yako muende kumusha mutsva nekukurumidza sezvinobvira. Kunyangwe izvo chete zvinodikanwa zvekuenda kune dzimwe nyika zvinowanzo kunetsa kunzwisisa-usatombo funga nezve paramende yeakawandisa-akatsemuka ekuenda zvirongwa. Kana iwe ukazviona iwe pachako wakarasika mugungwa remitemo yekutamira kune dzimwe nyika nemirau, Mamirioni Makers anofambisa. tichaita kuti zviome, zvive nyore uye zvakapusa, sezvo isu tichaedza kukutungamira iwe nemhuri yako kuburikidza nezvinodiwa zvekupinda munyika yako nyowani. Nerutsigiro rwedu rwakajeka, rwakajeka uye rwakagadziridzwa, iwe unonzwisisa rako basa mukati mekufamba kwekushanya uye nekuziva chaizvo izvo zvaungafanira kuita kuti iwe nemhuri yako muende kumba kwenyu nyowani nekukurumidza sezvinobvira nenzira inoshanda kwazvo.
Dzimwe nguva zviri nyore kwazvo kutama kwekushanya zvinogona kuve kwakaoma kunzwisisa, asi, usamboita hanya nematanho ehurongwa hwakaenzana hwekubva. Kana iwe ukazozviona iwe wakarasika mune gungwa remitemo yekushambadzira nemirairo, Mamirioni Macheya achafambisa. Isu tichaita kuti zvive nyore kuwanda sezvo isu tine maitiro ekutungamira iwe nemhuri yako kuburikidza nezvido zvekupinda nenyika yako itsva.
Netsigiro yedu yakajeka, yakapusa, yakapfupika, yakajeka uye yekusimbisa munhu, iwe uchazonyatsonzwisisa basa rako mukati mekutama kwekunze uye unonzwisisa chaizvo izvo zvaungade kuita kuti upinze iwe nemhuri yako kuimba yako nyowani nekukurumidza sezvazvinogona kuitika.
Kusarudzwa kwemukana wakanakisa / Sarudzo dzekuti ubudirire kuzadzikiswa kweZvinangwa uye zvinangwa.
24/7/365 yekuwana yako kesi kubva kune chero nzvimbo mukati mepasi.
Kuwanikwa kumitemo mitsva yekubvakacha, zvirevo nenhau.
Kunyangwe iwe uri kunge uine yakakura yakawanda-kutonga kwemutemo kana kuti uri kutsvaga rubatsiro nekubvakacha mune yakajeka nyika kana dunhu, Mamirioni Vagadziri vachakubatsira iwe pasina museru kudzora kufamba kwevashandi / vashandi vako. Yakagadzirirwa kugutsa zvaunoda kuti uwane kutsigirwa kwakazara, huwandu hwedu hwakazara hwemabasa ebvumo yebasa uye mvumo yekubvumidza inofambisa shuwa
Aya masevhisi anosanganisira:
Kugadzirira kwekunyorera uye kuisa faira yebasa renguva pfupi uye mvumo yekugara, mavisa ekupinda, clear clearance nenyaya dzevatorwa.
Visa nyaya tsigiro.
Kupa zano pakupinda uye kubva pamaitirwo ezvinhu.
Kupa mazano ekuchengetedza uye maitiro ekurapa clearance.
Kupa mazano ematare akaomarara, kusanganisira kutsigirwa uye kushambadzira pamberi pemagavhuna ehurumende.
Kurudziro yekutsamira uye yemhuri mitezo vhiza kugadzirisa, kugona kuona zvinhu, nyaya dzine chekuita nevadzidzi uye kuchengetedza kumira uye chinzvimbo.
Boka redu revashandi vanoita basa uye vane ruzivo vanotora nguva vanonzwisisa zvinangwa zvekambani yako yebhizinesi, zvinangwa zvevakatorwa uye zvevakuru. Ivo vanotaura vakasununguka nemi uye vako vaakabvumirana mukati merimwe basa rekubuda, vachivaka kudyidzana kwakabatana uye nekupa yakazara, yakagadziriswa rutsigiro.
Sarudza nyika ye Work imvume
Sarudza Nharaunda EuropeEuropean UnionAfricaAsiaAustralia uye OceanicCaribbeanMiddle EastNorth AmericaSouth America Select Country
Nyika dzepamusoro dzinodiwa nevari kukwikwidza
Isu tinoshanda nevanozovhota uye Vashandirwi mune dziri pasi dzinotaurwa nyika:
Isu hatitsigire kana kupa basa redu kune pasi apa zvataurwa (s) kune vanhu uye / kana mabhizinesi:
Chero chishandiso chinogona kukonzera kushungurudzwa kwekodzero dzevanhu kana kusevenzeswa kushushwa.
Kutengeserana, kugovera kana kugadzirwa kwemaoko, zvombo, mabira, masenari kana chibvumirano kutengesa zvinhu.
Unyanzvi hwekutarisa kana bugging midziyo kana maindasitiri espionage.
Chero zviitwa zvisiri pamutemo kana zvechitsotsi kana munhu (ma) zvakasviba zvakanyorwa pasi pemutemo wenyika chero ipi.
Zvakaipa kana zvine njodzi zvipenyu, zvemakemikari kana zvenyukireya izvo zvinosanganisirawo, nhumbi kana michina inoshandiswa kugadzira, kubata kana kurasa zvinhu zvakadaro.
Kutengesa, kuchengetedza kana kufambisa nhengo dzeMunhu kana mhuka, kushungurudzwa kwemhuka kana kushandiswa kwemhuka kwese kuyedzwa kwesainzi kana kwechigadzirwa.
Masangano ekuberekesa vana, anosanganisira maitiro ekurera vabereki kana chero chimiro chekushungurudza kodzero dzevanhu.
Zvitendero zvechitendero uye nerudo rwavo.
Zviitiko zvebhizinesi, izvo nemirairo nemirairo yenyika yekuumbwa kweChipo zvinopihwa marezinesi uye zvinoitwa pasina kupihwa rezinesi.